यौन सम्पर्क पछि पुरुषहरु किन चाडै निदाउछन? महिलाहरुले के चाहान्छ्न! -
यौन सम्पर्क पछि पुरुषहरु किन चाडै निदाउछन? महिलाहरुले के चाहान्छ्न!
३१ बैशाख २०७६, मंगलवार २२:३९ May 14, 2019 GS Nepal0Comments
एजेन्सी, महिला र पुरुषबीच शारीरिक सम्बन्ध भइसकेपछि कतिपय पुरुषहरु तुरुन्तै निदाउने गर्छन् भने कतिपय महिलाहरुमा त्यसको असर २४ घण्टासम्म देखिने गर्छ । शारीरिक सम्बन्ध राख्ने वित्तिकै महिलालाई अंगालो नहाली वा कुराकानी नगरी निदाउने पुरुषप्रति महिलाहरुको धारणा फरक हुने गर्छ । जस्तो कि स्वार्थी, माया नगर्ने, असन्तोषी जस्ता आरोपहरु लगाउने गर्छन् । तर, के वास्तवमै यौनसम्पर्क राख्नेवित्तिकै निदाउने पुरुष साँच्चै स्वार्थी हुन्छन् त ? किन पुरुषलाई यौनसम्पर्क राख्नेवित्तिकै निन्द्रा लाग्छ ?
सामान्यतयाः रातको समयमा शारीरिक सम्बन्ध राख्ने गरिन्छ । रातको समयमा प्रायः मानिसहरु थाकेका हुन्छन् । शारीरिक सम्बन्ध राख्ने वित्तिकै निन्द्रा लाग्नुको पहिलो कारण यहि नै हो । तर, शारीरिक सम्बन्ध प्राकृतिक प्रक्रिया हो । शारीरिक सम्बन्धको बारेमा महिला र पुरुषको शरीरमा भिन्न प्रकारको प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्छ । महिला अग्रानिज्म अझै उत्तेजित हुन्छ र महिलाहरु शारीरिक सम्बन्धपछि झन् बढी पुरुषको मायामा पर्छन् । पुरुष अग्रानिज्म भने शारीरिक सम्बन्ध पछि इज्याकुलेट हुन्छ र हर्मोन उत्पादन हुन्छ । जसले शरीरमा आलस्यता पैदा गर्छ साथै शारीरिक सम्बन्धको दौरान शरीर निकै थाक्ने भएकाले पुरुषहरु छिट्टै निदाउने विभिन्न अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।
तर महिलाहरु शारीरिक सम्बन्ध पछि के चाहान्छिन् त – शारीरिक सम्बन्ध पुरुष र महिलाबीचको प्राकृतिक आकर्षणको मुख्य कारण हो । प्रायः महिलाहरू आफ्नो पार्टनरसँग मात्र शारीरिक सम्बन्ध राख्न रुचाउँछन् । शारीरिक सम्बन्धले महिला र पुरुषविचको सम्बन्धलाई पनि मजबुत बनाउँछ भनिन्छ, तर कतिपयको भने शारीरिक सम्बन्ध पछिको सम्बन्धमा विचलन भएको पनि पाइन्छ । शारीरिक सम्बन्धपछि महिलाहरूले आफ्नो पुरुष साथी र आफूबारे कस्ता कुराहरू सोच्न सक्छन् ? हेर्नुहोस् शारीरिक सम्बन्धपछि महिलाहरूले सोच्ने १२ कुराहरू :
आनन्द र सन्तुष्टीबीच फरक – किंसले इन्स्टिच्यूटले गरेको शोधमा महिलाले पनि पुरुष जस्तै साधन नलगाइ शारीरिक सम्बन्ध गर्दा बढी सन्तुष्टी हुने बताए । यद्यपी साधन लगाउँदा बढी सुरक्षित महसुस हुने उनीहरुको भनाइ थियो । विस्तारै गरेको राम्रो – शारीरिक सम्बन्धका लागि हतारिने पुरुष महिलालाई मन पर्दैन । उनीहरु आफ्ना संवेदनशील कोमल अंगमा पुरुषले दुख्ने गरी केही पनि नगरुन् भन्ने चाहन्छन् । संवेदनशील अंगसँग संवेदनशीलरुपमै प्रस्तुत भएको उनीहरुलाई मन पर्छ ।
मादकपदार्थ सेवन गर्ने चाहना – शारीरिक सम्बन्धपछि केही महिलालाई रक्सी सेवन गर्ने मन पनि हुन्छ । त्यो बेला उनलाई रक्सीले आफूलाई फाइदा गर्छ वा गर्दैन भन्ने थाहा हुँदैन । भोक लाग्नु – शारीरिक सम्बन्धका क्रममा शक्ति खर्च हुन्छ । यसकारण तपाइको जोडीले भोक लागेको महशुस गरेका हुन्छ । तपाईप्रति सकारात्मक – यदि शारीरिक सम्बन्धका क्रममा तपाइले जोडीलाई सन्तुष्टी दिन सक्नुभयो भने उनले संसर्गपछि तपाइप्रति सकारात्मक सोच्न थाल्छिन् । चाहे उनले यसको संकेत दिन पनि सक्छिन्, नदिन पनि सक्छिन् ।
शारीरिक सम्बन्ध एक काम – कुनै महिला संसर्गलाई एक महत्वपूर्णका कार्यका रुपमा लिन्छिन् । जुन पुरा हुने वित्तिकै आफ्नो अर्को काममा लाग्ने गर्छिन् । शारीरिक सम्बन्ध गरेकोमा विश्वास नलाग्नु – कयौं पटक महिलाहरुलाई आफूले कसैसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेको कुरा पत्याउन गाह्रो पर्न सक्छ । यस्तो दुइवटा परिस्थितीमा हुन सक्छ । पहिलो, जब शारीरिक सम्बन्ध गर्ने व्यक्ति पहिलो पटक संसर्ग गरिरहेका छन् र दोस्रो, जब महिला जोडीलाई आशा गरे विपरित सम्पर्क भएमा ।
के म उनको लागि ठीक थिएँ – शारीरिक सम्बन्धपछि कतिपय महिलाको मनमा आफू आफ्नो जोडीको लागि ठीक थिएँ त भन्ने कुरा पनि मनमा लाग्ने गर्छ । उनी आफूसँगको सम्पर्कबाट आफ्नो जोडी सन्तुष्ट भयो वा भएन भन्ने बारेमा पनि जान्न चाहन्छिन् । उसले गर्ने मायामा फरक त पर्दैन – कैयौं पटक महिलाहरुलाई शारीरिक सम्बन्धपछि आफ्नो जोडीले पहिलेको जस्तै माया गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा दुविधा हुन्छ । यस्तो विषयले महिलाहरुलाई बढी सोच्न बाध्य बनाउँछ । कतै मैले यो गलत त गरिन – यदि कुनै महिला आफ्नो श्रीमान वा ब्वाइफ्रेण्डलाई धोका दिएर अन्य कसैसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्छिन् भने उनलाई आफूले यो के गरेको भन्ने मनमा खेल्ने गर्छ । उनलाई पछि आफूले यस्तो गर्न नसक्ने सोच्छिन् ।
दोस्रो पटक पनि गर्न सक्छौं – कुनै बेला महिलाहरु शारीरिक सम्बन्धबाट यति धेरै सन्तुष्ट हुन्छिन कि उनी अर्को पटकका लागि पनि तुरुन्तै तयार हुन्छिन् । त्यसका लागि आफ्नो जोडीको मन तान्न थाल्छिन् । समय अभाव भएको महशुस – महिला जोडीलाई शारीरिक सम्बन्धका क्रममा समयलाई लिएर तपाइप्रति निकै अपेक्षा हुन्छ । उनले तपाइलाई खरो रुपमा उत्रेको देख्न चाहन्छिन् । नभए उनी निराश समेत हुन्छिन् । विभिन्न अनलाइनबाट
← शुभ बिहानी💘💘आज मिति२०७६ साल जेष्ठ १ गते बुधबार तपाईंको राशी अनुसार यस्तो प्रतिफल मिल्नेछ, राशिफल पढी शेयर गर्नुहोस।
अन्जनाका श्रीमान भन्छन, “दाइको मानसिक अबस्था ठिक नभए किन प्रहरी बोलाउनुस भन्नुहुन्थ्यो ?” भिडियो सहित →
एक लाख पुरुष सङ्ग सम्बन्ध राखेर बिश्व रेकर्ड राख्ने यी महिलाको चाहाना, अहिले सम्म कति पुग्यो? यो हेर्नुस् पूरा जानकारी ।
२ फाल्गुन २०७५, बिहीबार २३:४१ GS Nepal 0
रुसि रास्ट्रपति बम र गोलिले पनि केही नहुने १ सय ९२ मिलियन अमेरिकी डलर पर्ने गाडि चड्छ्न , अन्य देशका बारेमा जानकारी लिनुहोस।
३ चैत्र २०७५, आईतवार ०१:१८ GS Nepal 0